Ebe kachasị mma ndị njem na Benidorm | Akụkọ Njem
Ebe kachasị mma ndị njem na Benidorm
Monica sanchez | | Alicante, Ihe ị ga-ahụ
N'ebe ọwụwa anyanwụ nke ụsọ mmiri Iberian Peninsula, nke mmiri Mare Nostrum na-asa bụ obodo njem nleta pụrụ iche: benidorm. Nke a bụ ebe ị nwere ike ịga leta ezinụlọ gị niile, ebe ị ga-ahụ ọtụtụ ntụrụndụ dị iche iche. Dịka enyi, ị ga - enwe ihu igwe mara mma, nke ga - enyere gị aka iji oge echefu echefu n’oge ọ bụla n’afọ.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme n'obodo a, ya mere You ga - achọ ka anyị gaa ebe kachasị mma ndị njem na Benidorm ọnụ?
Ọ bụ ezie na anyị nwere ike iche na Benidorm bụ obodo na-eto eto na-eme njem nleta, eziokwu bụ na ihe karịrị narị afọ abụọ gara aga ọ malitere njem ya. N'ezie, na 1803, e bipụtara akwụkwọ aha ya bụ 'Foto nke Valencia' nke Christian August Fischer dere ebe ebe a kpọtụrụla obodo ahụ dị ka ebe mmasị pụrụ iche nke ndị njem nleta. Yabụ, ọ bụrụ na ị maghị ebe ị ga-aga ebe ọzọ ị ga-aga ma chọọ ijide n'aka na ị ga-enwe ọmarịcha oge, o doro anya na nke a bụ obodo gị ebe, dịka ị ga-ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịnụ ụtọ mbara ọtụtụ oge ntụrụndụ na egwuregwu na-enye. Mana tupu nke a, anyị ga-ebu ụzọ kwụsị ya na osimiri mara mma. Ma ọ bụrụ na ihe niile obodo nwere na-enye na-eme gị obi, a ezi nhọrọ bụ ịgbazite otu n'ime ulo na Benidorm nke a na-enye ha n’ Internetntanet.
2 Njem njem mmiri
4 Oge ntụrụndụ abalị
5 Na… olee ebe anyi ga-ano?
Ọ bụrụ na enwere ihe mpaghara a dị na Mediterenian na-etu ọnụ, ọ nwere ụsọ osimiri nwere ihe ọ bụla agaghị enwe anyaụfụ nke ndị Caribbean. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na mmiri ya na-acha na aja ya nke mara mma bụ ihe ngosi. Ma ị chọrọ iji ụbọchị ole na ole iji pụọ na anwụ, ma ọ bụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịme egwuregwu mmiri, dị ka ịmị mmiri mmiri ma ọ bụ ịmịpụ mmiri, ị nwere ike ịme ya oge ọ bụla ịchọrọ. Ndị kasị akpali bụ Ala la Almadrava, nke dị mma maka ndị na-achọ udo, na Cala Malapas nke zuru oke iji soro umuaka nwee obi uto.
Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, ọ nwere osimiri abụọ nwere ebe nwere ike ịnweta maka ndị nwere nkwarụ, nke bụ osimiri Poniente na osimiri Levante. Kedu ihe ọzọ ị ga-achọ? Tinye n 'anwu anwu iji kpuchie onwe gi site na ikuku ultraviolet, na jikere inwe ụfọdụ ịrịba oge.
Njem njem mmiri
La Oghere Benidorm Ọ bụ otu n’ime ebe pụrụ iche ị pụrụ ịchọta. Mmiri ya dị jụụ na nke na-agbanwe agbanwe, na-enweghị mmiri dị mkpa, ga-enye gị ohere ịnụ ụtọ njem ị ga-enwe ike ichefu. Ebe a ga-apụ ga-abụ obere marina, ebe ụgbọ mmiri nke ga-akpọrọ anyị gaa n'ọnụ mmiri ga-echere anyị.
Ọ bụ ezie na ịnwere ike ịga njem njem n'afọ niile, a na-atụ aro ya nke ukwuu ime ya n'oge ọnwa ọkọchị, nke ahụ bụ ịsị, site na June ruo September, nke bụ mgbe ọnọdụ okpomọkụ kachasị mma iji nwee obi ụtọ n'oké osimiri nke na-asacha n'ụsọ Benidorm.
Mgbe ị nọsịrị oge ole na ole iji zuru ike n'ụsọ osimiri, olee ụzọ ka mma karịa ịme obere egwuregwu. Otu n'ime ebe ị na-agaghị atụ uche bụ Ogige ntụrụndụ nke Sierra Helada, ebe ị nwere ike ịga njem na ọbụna ịrịgo, dị ka ugwu ya dị 300 mita. The echiche dị ebube, ya mere echefula inwe igwefoto dị njikere.
Nhọrọ ọzọ bụ gbazite igwe kwụ otu ebe ma gbasaa obodo. Dị ka ọ nwere mbara ala dị iche iche, ndị sonyere na ihe omume ịgba ịnyịnya ígwè dị mkpa gafere ebe a, gụnyere Vuelta a España ma ọ bụ La Volta a la Marina. Yabụ ma ị bụ onye hụrụ egwuregwu n'anya ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịpụ maka ịgagharị, jiri ohere ma nọrọ n'ọdịdị site n'ije n'okporo ámá nke obodo ahụ.
Oge ntụrụndụ abalị
Tupu ụbọchị ahụ agwụ, olee ụzọ ka mma karịa isi kwụsị ya site na ịga nleta kachasị mma. N'ebe a, ị ga-ahụ onyinye sara mbara, yabụ ajụjụ agaghị abụ "ihe ị ga-eme n'abalị a?", Kama kama "gịnị ka anyị na-eche?" 😉. Ma ọ bụrụ na-amasị gị na-egwu egosighị mmetụta, Black Jack ma ọ bụ ndị ọzọ kpochapụwo egwuregwu, na-etinye na gị mma uwe na-eleta Obodo Casino, ebe i nwere ike ịnụ ụtọ omenala Mediterranean na-esonyere ihe ọ Mediterraneanụ drinkụ na-amasị gị kachasị.
Maka ndị na-ahọrọ ihe dị jụụ, ha nwere ike ịga leta Benidorm ọgbọ egwuregwu, nke na-emepe Saturday ọ bụla site na elekere isii nke ehihie. Nke a bụ ihe mbụ circus, ebe ọ na-ejighị anụmanụ na ihe ngosi ya. Ndị na-akwado ya bụ ndị na-ese ihe n'onwe ha, ndị egwu n'okporo ámá, ndị jugglers, ndị na-ese trapeze ... Ọ bụrụ na ị bụ okenye, gị na ha nwere ike ịlaghachi n'oge ị bụ nwata maka oge ole na ole; Ma ọ bụrụ na ị bụ nwatakịrị, ị ga-ekpori ndụ oge ebe ihe ọ bụla bụ ihe ọ dị ka seems.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị hụ na ị ga-eri nnukwu mmanya, Benidorm na-etinye n'aka gị Ọzụzụ Benidorm Group 'MICROFIESTA', nke ejiri ya mee ka ezumike ahụ bụrụ ebe nchekwa dị mma, ebe ị nwere ike ịnụ ụtọ oge na-enweghị nsogbu. N'ezie, ị kwesịrị ịmara na ọrụ a ga-ede akwụkwọ 24 awa tupu ụbọchị a. ibe weebụ. Ka abalị gị ghara ịkwụsị ọjọọ, were ụgbọ ala.
Na… olee ebe anyi ga-ano?
Mgbe aru gwara anyi ka anyi zuru ike, oge eruola ka anyi nye ya ezigbo nkasi obi. Na Benidorm ị ga-ahụ ọtụtụ ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ nke nwere ebe a na-egwu mmiri na ebe a na-egwu mmiri n'èzí na-eji anyanwụ eme ihe, ebe a na-ahụ maka ebe a na-egwu mmiri, echiche mmiri na onye ime ya ga-eme Anyị agaghị echefu ebe anyị nọ. Ime ụlọ ahụ nwere TV, njikọ Wi-Fi, yana ọchọ mma nke ọma ma lekọta anya.
Ọbụlagodi, ọ bụrụ na anyị chọrọ ijekwuru onwe anyị, n’etinyeghị anya na nhazi oge, anyị nwere ike ịgbazite ụlọ. Ọ bụ ezigbo nhọrọ maka ndị chọrọ nzuzo ọzọ. Ulo ulo dị oke ọnụ ala, na-amalite na 15 euro kwa ụlọ na abalị.
Ebe ọ bụ na ha dị nso na ụlọ mmanya na ebe a na-atụrụ ndụ, naanị ihe anyị ga-eme bụ GPS nke ekwentị anyị ma ọ bụ nye iwu tagzi ka ọ gaa ebe anyị chọrọ.
Olileanya njem a enyerela gị aka ma ị nwere ọmarịcha njem. Mediterenian dị oke iche na onye ọ bụla hụrụ ya hụrụ ya n'anya, ya mere ejiri m n'aka Na Benidorm ị ga-ahụ ezumike ị rọrọ nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Alicante » Ebe kachasị mma ndị njem na Benidorm
Palmyra, ihe ịtụnanya dị n’ọzara Siria
Ebe nkiri kachasị mma na Buenos Aires